Ama-Aries kaNovemba 2020 Wenyanga Yenyanga - Izindatshana Ze-Horoscope
Main Izindatshana Ze-Horoscope Ama-Aries kaNovemba 2020 Wenyanga Yenyanga
Ama-Aries kaNovemba 2020 Wenyanga Yenyanga
scorpio man aries woman umshado
Phakathi nenyanga kaNovemba, abakwa-Arieses bazohlomula ngamandla engqondo amaningi kanye nokukhuthazeka kunokujwayelekile. Uzoba nemibono eminingi emisha futhi ufuna ukwenza umsebenzi wokuzithandela.
Ugqozi luzokuhlula, futhi abathandekayo bakho bazokuqaphela. UNovemba yinyanga ekahle yokuqala ibhizinisi ngalezi zimpawu zomlilo. Ama-Arieses afuna ukuvelela, ngakho ukufeza izinhloso zabo kuzobalethela ukwaneliseka okukhulu.
Le nyanga ibuye ithembise izinsuku ezimatasa emsebenzini, ingasaphathwa eyokuthi uzokwazi ukuthi uyakwazi ukulawula isikhathi sakho, ngakho-ke uzodlula kukho konke kalula.
Ngaphandle kwalokho, ngokuba nekhono kakhulu, ngokushesha uzonaka abaphathi bakho. Uma kukhulunywa ngothando, ungahle ube nokungaboni ngaso linye nomlingani wakho, kepha akukho okubi kakhulu.
Izithombe ezivelele zikaNovemba 2020
Uzobhekana nezinguquko eziningi emsebenzini, izinguquko ezizokusiza ukuthi uthuthuke emsebenzini wakho. Kodwa-ke, lokhu ngeke kwenzeke ngaphandle kosizo lomeluleki ngisho noyedwa noma mhlawumbe bobabili abazali bakho.
Phakathi nenyanga kaNovemba, ukuvelela kuzoba amagama akho. Qiniseka ukuthi ugxila ekufezeni izinhloso zakho. Umlingani wakho uzokuthanda futhi ubungani bakho namandla azoba mnandi.
IMercury iseLibra kuze kube yi-10th, noVenus kuze kube yi-21st, ngakho-ke sebenzisa lezi zici ukuze ubumbane nabanye. UMars, umbusi wakho, uzoba kusibonakaliso sakho inyanga yonke, akunikeze umuzwa oqinile womphakathi.
Ngasikhathi sinye, iLanga liseScorpio kuze kube yi-21st, futhi iMercury lapha eqala ngo-10thfuthi kuze kube yi-30th, sizoba nenkuthalo enkulu futhi ikhiphe injabulo. Kodwa-ke, cabanga kabili ngaphambi kokwenza futhi ungasheshi.
Ukuqala ngama-22ndfuthi kuze kube yi-30th, lapho iLanga lizoba seSagittarius, thatha isinyathelo nje. Ngesikhathi sesinqumo sokuqala, u-Uranus uzoletha uguquko kwezezimali. Ngokuqondene nezinqamulelo ezi-2 zokugcina zenyanga, kuzoba namandla amakhulu eplanethi azokusiza wenze izinguquko empilweni yakho yezenhlalo nezobuchwepheshe.
I-Aries Love Horoscope ngoNovemba
Ngoba uVenus noMars bazoba seLibra, uzozizwa uvusa imizwa, unothando futhi unethenda kunakuqala. Uzobathola kalula abantu ohambisana nabo kwezengqondo nangokobulili, kepha iMars ingadala izingxabano ezithile.
Nge-Saturn kusibonakaliso se-Sagittarius, ubunzima buzonqotshwa kalula futhi ukuthola ingoma entsha kuzobukeka njengocezu lwekhekhe. Ithonya likaMars ngokulwa lizovutha uthando lwakho kuphela.
Nizoba nobucayi futhi nibe nobulili obukhulu. Isonto lokuqala lenyanga lingaletha izingxabano ezithile ezinesifiso sokubuswa inkanuko. Izothando zizoguquka ngokwanelisayo, noma kunjalo.
Umlingani wakho weTaurus uzoba nempahla futhi asongele ukuzimela kwakho., Kanti iCancer izoletha izinkanuko eziningi etafuleni. Ngama-Scorpios, ama-Arieses kufanele axoxe ngokuhlala othandweni kakhulu, ukubekezela nokulinda kancane abakufunayo.
Iplanethi yabathandi iVenus izokweseka ama-Arieses ngale nyanga, okwenza izinkinga kube lula ukubekezelela ulaka. Ukubekezelelana, ubumnene nokuqonda kuzokwenzeka.
IMercury izosiza amaRams ukuthi aziveze. Wena, ama-Aries, kufanele ugweme ukuqhuma uma ungafuni ukuzisola ngamagama akho kamuva. Khumbula ukuthi iMars yenza into yayo futhi idinga ukulawulwa.
Umsebenzi kanye nezezimali i-Horoscope
IJupiter eVirgo izoletha izindaba ezimnandi ekuqaleni kwenyanga, kodwa kuphela uma ungathatheki noma wenza into enkulu ngezinto. Emsebenzini, uzoxhumana kahle kakhulu, futhi ube nesifiso sokusebenziseka kuwo wonke umuntu.
UJupiter wenza izethembiso zokukhiqiza, indawo enhle nobuhlakani. Uzosebenza kanzima futhi uzibophezele kumaphrojekthi akho, futhi onokwethenjelwa futhi oqondayo, noma ngabe iMars eLibra ingahle ilethe izingxabano ezithile.
Ama-Aries azophinde adinge ukubekezela phakathi nezinsuku zokuqala zikaNovemba, ngoba kungenzeka abe nokungaboni ngaso linye nabalingani babo.
Ukuzola kuzobuya, ingasaphathwa eyokuthi bazohlolwa yizinkanyezi uma sekuziwa ekutholeni ukuthi ibhalansi yeJustice idlala kanjani ngabo. Ezinye izingane zaseMars zizozuza njengefa noma zithole izinzuzo zezezimali.
Uma besebenza noLeos, bazoba nokubambezeleka ekufezeni amaphrojekthi abo, kepha bangabi nazinkinga emkhakheni wezothando. Ama-Capricorn azowafuna azinikele futhi angahle aguquguquke ezimfuno zawo.
Bheka ama-Aries Horoscope 2021 Izibikezelo Eziyinhloko
ISaturn eNdlu yesi-4: Kusho Ukuthini Ngobuntu Bakho Nempilo
Imonkey Taurus: Isifundi Sokuqamba Kwe-Chinese Western Zodiac
umdlavuza izici zobudlelwano
1976 unyaka we-zodiac wamaShayina
yini uphawu lwesinkanyezi ngumashi 15
usuku lwenhlanhla lwe-taurus 2016
i-capricorn indoda nokuheha owesifazane we-capricorn
kanjani ukuheha a sagittarius female